विश्वभर कोरोनाबाट ६ लाख ४२ हजारको मृत्यु, कुन देशमा कति ? - Deshko News Deshko News विश्वभर कोरोनाबाट ६ लाख ४२ हजारको मृत्यु, कुन देशमा कति ? - Deshko News
विश्वभर कोरोनाबाट ६ लाख ४२ हजारको मृत्यु, कुन देशमा कति ?
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । शनिबार बिहानसम्म विश्वभरमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ लाख ४२ हजार ६ सय ८८ पुगेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।
संक्रमितको संख्या १ करोड ५९ लाख ४० हजार ३ सय ८१ पुगेको छ । यस्तै विश्वभरमा कोरोनाबाट संक्रमण भएका ९७ लाख २३ हजार ९ सय ४९ जना उपचारपछि निको भएका छन् । हालसम्म अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट १ लाख ४८ हजार ४ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ४२ लाख ४८ हजार ४ सय ९० पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ८५ हजार ३ सय ८५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या २३ लाख ४८ हजार २ सय ०० पुगेको छ । त्यस्तै अर्को देश रसियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ हजार ४६ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ८ लाख ८ सय ४९ पुगेको छ ।